Deeq bixiyaasha mashruuca la dagaalanka Burcad-badeeda oo maanta booqday Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Deeq bixiyaasha mashruuca la dagaalanka Burcad-badeeda oo maanta booqday Puntland (Dhegeyso)
Nofeembar 9, 2013 4:45 b 0
Garoowe, November 9, 2013 – Magaalada Garoowe ee xaruunta Puntland waxaa soo gaaray wefdi ka socda dalalka deeq bixiyaasha ah ee weliba dhaqaalaha ku taageera la dagaalanka Burcad-badeeda, wefdiga ayaa booqday meelo muhiim ah.
Agaasimaha hay?ada la dagaalanka Burcad-badeeda Puntland Cabdirisaaq Maxamed dirir Ducaysane oo la hadlay idaacada daljir, waxaa uu sheegay in xubnahu ay ka socdaan kooxda la dagaalanka Burcad badeeda Soomaaliya ee loo yaqaan (Contact group on Piracy of Somalia)
?Ujeedka wefdiga oo dalal badan ka socda wuxuu yahay in ay oggaadaan in ay halka baxday deeqihii ay bixiyeen ee loogu talo-galay la dagaalanka Burcad-badeeda gobolka.? Ayuu yiri Cabdirisaaq Ducaysane oo daljir u waramay.
Agaasime Ducaysane ayaa sheegay in wefdigan ay ka qayb-geli doonaan shir dhowaan ka dhacaya dalka Jabuuti, balse safarkooda Puntland uu salka ku hayo in ay arkaan dhismayaal, xabsiyo Burcad-badeed, iyo weliba meelo kale oo muhiim oo ay dalka ka sameeyeen.
?Xubnaha ka socda kooxda la dagaalanka Burcad-badeeda waxay kormeereen xaruunta Asluubta ee Garoowe, xabsi loogu talo-galay Burcad-badeeda iyo Maxkamadaha iyo meelo kale oo muhiim.? Ducaysane ayaa daljir u sheegay in wefdigu la kulmeen madax ka tirsan Puntland oo uu ku jiro wasiirka cadaallada iyo taliska asluubta.
Dhegeyso: Agaasime Cabdirisaaq Ducaysane oo u waramay Jamaal faarax oo daljir ka tirsan
Dr. Warsame ?Shirka caafimaadka waa maqalnay, waana been in ergo ka tagtay Puntland? (Dhegeyso)
Musharax Prof. Cabdiweli Gaas oo maanta gaaray Galkacayo iyo shacabka oo soo dhoweeyey (Dhegeyso)